Chii chinonzi TV uye Monitor Bias Mwenje? - MediaLight Bias Chiedza
Chii chinonzi TV uye Monitor Bias Mwenje?
Chii chinonzi bias magetsi uye nei tichinzwa kuti inofanirwa kuve yakakwira CRI ine tembiricha tembiricha ye6500K?
Kuvhenekera mwenje sosi yekuvhenekera iyo inouya kubva kuseri kwechiratidziro chako, ichivandudza mashandiro anoita TV yako kana tarisiro, nekupa chirevo chisingachinjiki chemaziso ako. (Ini handisi kutaura nezvezvitsva zvemavara emwenje mwenje mwenje unoshandura yako yekutandarira kupinda ku disco).
Chii chinoedza kuita mwenje?
Kuvhenekera kwakaringana kunounza matatu akakosha ekuvandudza kune yako yekutarisa nharaunda.
Kutanga, inoderedza kushushikana kwemaziso. Paunenge uchiona munzvimbo ine rima, yako yekuratidzira inogona kubva kubva yakasviba zvachose kuenda kune yakajeka kwazvo chiitiko kazhinji panguva yekuratidzira kana firimu. Vadzidzi vemaziso ako vanofanirwa kukurumidza kuchinjika kubva kurima rakazara kuenda kune ichi chakajeka uye, nekufamba kwekutarisa kwemanheru, unogona kutambura nekuneta kweziso. Kuvhenekera mwenje kunoona kuti maziso ako anogara aine mwenje sosi mukamuri pasina kudzikisira kubva, kana kuratidzira kure, kuratidza kwako. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero kukoshesa mwenje kunenge kuri kudikanwa kune chero terevhizheni yeOLED, iyo inokwanisa kune vatema vakanyanya, uye chero HDR yakatarwa, iyo inokwanisa kukwidziridzwa kwepamusoro.
Kechipiri, kuvhenekera mwenje kunonatsiridza kuratidzwa kwako kunoonekwa. Nekupa chirevo chakareruka kuseri kweterevhizheni, vatema vekuratidzira kwako vanoita senge nekusviba nekuenzanisa. Unogona kuona chaizvo kuti izvi zvinoshanda sei nekutarisa uyu mufananidzo. Grey rectangle iri pakati ndeye mumvuri mumwe we grey, asi sezvatinorerutsa nzvimbo yakatenderedza, uropi hwedu hunozviona sekusviba.
Chekupedzisira, kurerekedza mwenje kunopa chena poindi referensi kune yako yekuona system kuenzanisa pane-skrini mavara kune. Nekupa iyo yepedyo uye isingachinjiki kubereka kweyekufananidza D65 chena, iyo MediaLight ndiyo iri yakanyanya kunaka chigadzirwa pamusika kuti uwane yakakwira color acuity.
Iyo MediaLight muunganidzwa weindasitiri-inotungamira RuvaraGrade ™ mwenje ye LED pane yakasungirirwa tambo, iyo inopa yakapusa uye ine simba kukoshesa magetsi mhinduro kune chero kunyorera. Iyo inowanikwa nyore mukati memaminitsi uye, kazhinji, inofambiswa kuburikidza neterevhizheni yako USB chiteshi, zvichireva kuti MediaLight ichavhura uye kudzima padivi peterevhizheni yako otomatiki. Izvi zvinoita kuti MediaLight ive "set uye kanganwa" kuisirwa uye, kana iwe ukafunga kuti ese MediaLight bias mwenje mitsetse inotsigirwa newashanu makore garandi, zvinoreva kuti ivo vari nyore akanyanya kukosha kukwiridzira iwe aunogona kuita kune yako yekumba varaidzo nharaunda.
Asi hazvisi zvekushandisa zveimba yemitambo chete - iyo MediaLight inoshandiswa munzvimbo dzehunyanzvi dzekurongedza ruvara zvakare. Muchokwadi, iyo mhuri yeMediaLight ikozvino inosanganisira maratidziro eD65 matafura ematafura nemabhuru ayo ese anoratidzira zvakafanana 98 CRI uye 99 TLCI ColourGrade ™ Mk2 LED chip seMediaLight mitsetse, uye inotsigirwa newarandi yemakore matatu.
Unogona kufunga kuti OLED haibatsirwe nemwenje yekusarura, asi unenge usiri iwo. Nekuda kweakanaka matema nhanho uye zvakanyanya kwakanyanya kusiyanisa zviyero zveOLED uye Micro LED zvinoratidzira, kumeso kwemaziso ndiko kunetseka kukuru.
Iwe unoti hausangana nematambudziko eziso? Kupenya kunoonekwa kana rima rekuratidzira richiri kungowedzerwa uye musiyano uchiri kuwedzera, zvisinei nekwaniso yechiratidziro.
Mumufananidzo unotevera, tinopa maviri machena machena pakati peye nhema chiratidzo. Ndeupi anotaridzika kupenya?
Izvo zviviri zvakafanana, uye zvese zviri zviviri zvinogumira nekukwirisa kukuru kwekuratidzira kwako.
Nekudaro, kana iwe ukataura kuti machena machena kuruboshwe anotaridzika kupenya, iwe uchangobva kuona kuti mabhii ehusarura anowedzera sei musiyano. Vanhu vazhinji vanotenda zvisirizvo kuti mwenje wekusarura unongogadzirisa zvemumvuri. Iye zvino unogona kuvaratidza kuti havana kururama. Magetsi ekusarura anosimudzira musiyano unoonekwa kuburikidza ne ose simba renji - kwete chete mimvuri!